Ciyaaryahanka koowaad ee uu Mauricio Pochettino keenayo Manchester United haddii uu noqdo Macallinka kooxdaas oo la ogaaday – Gool FM
Haaruun November 22, 2021
(Manchester) 22 Nof 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dhowaan iska cayrisay macallinkeedii Ole Gunnar Solskjaer, waxaana ay haatan baadi-goob ugu jiraan inay helaan Tababare cusub.
Macallimiinta la la xiriirinayo shaqada kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford ayaa waxaa ka mid ah Mauricio Pochettino, waxaana durba la ogaaday Weeraryahanka uu saxiixiisa koowaad ee Man United ka dhigayo haddii uu qabto shaqada hoggaamineed ee Man Utd.
Hoggaamiyaha reer Argentine ee Pochettino ayaa doonaya inuu Harry Kane ku soo biiriyo Manchester United, haddii ay uga magacowdaan Macallimkooda cusub.
Xiddiga kooxda Tottenham ee Harry Kane ayaa ah bartilmaameedka ugu sarreeya ee Mauricio Pochettino uu doonayo inuu keeno Manchester United, haddii tababaraha reer Argentine uu qabto shaqada garoonka Old Trafford, sida uu warinayo Warsidaha Fichajes.
Tababaraha PSG oo hore loola xiriirinayay doorka tababareenimo ee ugu sarreeya Masraxa Riyada ayaa haatan u soo muuqday musharrax sare xilli uu ka tagay Macallin Ole Gunnar Solskjaer.
Haddii uu qabto shaqadaas, waxa uu indhaha ku hayaa inuu Manchester kula midoobo xiddigiisii hore ee Tottenham, Kane, sidoo kale Macallinkaan waxaa bartilmaameedyadiisa ka mid ah Marquinhos iyo Marco Verratti.
Miyuu Thiago Silva ku dhow yahay inuu qandaraaska u kordhiyo Kooxdiisa Chelsea?